စိတ်ကျဆေးများသောက်ခြင်း၏နောက်ကွယ်သိပ္ပံပညာသည်နောက်ပြန်လှည့်နေသည်ဟုသုတေသီများကဆိုသည်။ Your Brain On Porn
အများအပြားစိတ်မကျဆေး Antidepressants နောက်ကွယ်မှသိပ္ပံနောက်ပြန်ဖြစ်ပေါ်လာသောသုတေသီများကပြောပါ
အဆိုပါဂျာနယ်အားဖြင့် posted စက္ကူ၏စာရေးဆရာများ, Neuroscience & Biobehavioral သုံးသပ်ချက်များ, စိတ်ကျရောဂါသုတေသနနီးပါး 50 နှစ်ပေါင်းကြီးစိုးသောသီအိုရီကိုထောကျပံ့ဖို့သက်သေအထောက်အထားများအဘို့လက်ရှိသုတေသန combed: စိတ်ကျရောဂါ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကြောင်း serotonin ဦးနှောက်ထဲမှာဆဲလ်များအကြားကွာဟချက်၌တည်၏။
အဆိုပါအနိမ့် serotonin သီအိုရီလေ့သတ်မှတ်ထားသောများအတွက်အခြေခံဖြစ်ပါသည် လက္ခဏာဆေးဝါးများ Selotonin re-uptake inhibitors ဟုခေါ်သောရွေးချယ်ထားသော serotonin inhibitors ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည် neurotransmitter ၏အဆင့်ကိုမြင့်မားစေပြီး၎င်းကိုထုတ်လွှတ်သောဆဲလ်များထဲသို့ပြန်လည်စုပ်ယူခြင်းကိုပိတ်ဆို့ထားသည်။
ထို serotonin တိုးမြှင့်ဆေးများသည်လူနာများအထူးသဖြင့်ရေတိုတွင်ဆေးဝါးများပြန်လည်ရရှိရန်ခက်ခဲစေသည်ဟု McMaster မှစိတ်ပညာ၊ အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလက်ထောက်ပါမောက္ခဖြစ်သော Paul Andrews ကပြောကြားခဲ့သည်။
Andrews က“ ငါတို့လုပ်နေတာတွေကိုပြန်စဉ်းစားရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ "ကျွန်တော်တို့ဟာစိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရတဲ့လူတွေကိုခေါ်ဆောင်နေပြီးသူတို့ကိုကူညီမယ့်အစားပြန်လည်ထူထောင်ရေးလမ်းကြောင်းအတွက်အတားအဆီးတစ်ခုထားနေပုံရတယ်"
SSRI ဆေးဝါးဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကျနေသည့်လူနာများတိုးတက်မှုပြသသောအခါသူတို့၏ ဦး နှောက်သည်၎င်းတို့မှတိုက်ရိုက်အကူအညီပေးမည့်အစားစိတ်ကျရောဂါဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများကိုအမှန်တကယ်ကျော်လွှားနေပုံရသည်။ ကူညီပေးမည့်အစားဆေးဝါးများသည် ဦး နှောက်၏ပြန်လည်နာလန်ထူမှုယန္တရားများကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်နေပုံရသည်။
အင်ဒီးစ်က“ လူတွေကသူတို့ရဲ့ပထမနှစ်ပတ်အတွင်းစိတ်ကျရောဂါကုသမှုကိုခံနေရသူတွေအနေနဲ့ပိုဆိုးတော့တာပဲ၊ ပိုဆိုးတော့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုငါတို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ "ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတာရှင်းပြပေးနိုင်တယ်။ "
အသက်ရှင်သောသတ္တဝါလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာတိုင်းတာရန်အဘယ်သူမျှမလုံခြုံလမ်းရှိသောကြောင့်, အသုတေသီရေးလိုက်, ဦးနှောက်ထုတ်နှင့် serotonin အသုံးပြုနေသည်အတိအကျဘယ်လိုတိုင်းတာရန်သည်လက်ရှိတွင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီအစားသိပ္ပံပညာရှင်များဦးနှောက်ပြီးသား metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်နှင့်တိရိစ္ဆာန်များကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများကနေ extrapolating အားဖြင့်မူကြောင်းကို serotonin ၏အဆင့်ဆင့်နှင့် ပတ်သက်. သက်သေအထောက်အထားများကိုတိုင်းတာအပေါ်အားကိုးရမည်ဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်သက်သေအထောက်အထားစိတ်ကျရောဂါဖြစ်စဉ်များအတွင်းမှာဖြန့်ချိခြင်းနှင့်အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်းပိုပြီး serotonin, မနည်းရှိကွောငျးကိုပြသပုံပေါ်သည်စာရေးဆရာကဆိုသည်။ အဆိုပါစက္ကူ serotonin ဦးနှောက်ထိုကဲ့သို့သောကြီးထွားမှု, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, မျိုးပွါး, ကိုယ်ခံအား function ကို, နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ဒေသများသို့သတိအတွေးဖို့ပိုပြီးနည်းပေးခြင်း၎င်း၏အရင်းအမြစ်များကို re-ချထားပေးခြင်းဖြင့်စိတ်ကျရောဂါလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကူညီပေးသည်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
Andrews ကတစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စိတ်ပညာရှင်သူတို့သုံးပြီးရပ်တန့်ပြီးနောက်စိတ်မကျဆေး Antidepressants ပိုဆိုးပုံသဏ္ဍာန်အတွက်လူနာစွန့်ခွာကြောင်းယခင်သုတေသနအတွက်စောဒကတက်နှင့်၏အများဆုံးပုံစံများထားပါတယ် စိတ်ကျရောဂါနာကျင်သော်လည်းဖိစီးမှုသဘာဝနှင့်အကျိုးရှိသောအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ကြသည်။
နောက်ထပ် Explore: တချို့စိတ်မကျဆေး Antidepressants ကနဦးရောဂါလက္ခဏာတွေပိုမိုဆိုးဝါးလာစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်